January 18, 2021 - समृद्ध नेपाल
फेरी सडक तताउने बेला आयो ! कुलमान हटेसँगै अब दैनिक लोडसेडिङ हुने (तालिकासहित
पूर्वीय दर्शनका महत्वपूर्ण पुस्तकहरु सङ्कलन गरी पशुपति क्षेत्रमा रहेको पशुपति पुस्तकालयमा राखिएका पुस्तक पढ्न लगेकाले २० औँ वर्षदेखि फिर्ता गरेका छैनन् । नेपाल वेद विद्याश्रमले विसं २०३१ मा स्थापना गरेको पुस्तकालयमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष स्थापना भएपछि कोषको पुस्तकालयसमेत एकीकृत गरी एउटै पुस्तकालय सञ्चालन गरिएको थियो । विसं २०५६ साउनपछि वेद विद्याश्रमसमेत कोषले सञ्चालन गर्न
बेहुलाको पैसावाट ८ लाखको किनमेल त्यसपछि बेहुली फरार !
आजकल विवाह भन्दा अघि नै बेहुला बेहुलीले संगै सामान किनमेल गर्ने प्रचलन छ । यस्तै प्रचलनका कारण वेहुलाको पैसावाट ६ लाख रुपैयाको किनमेल र अन्य खर्च २ लाख लिएर वेहुली फरार भएकी छन् हुनेवाली बेहुली आफ्नो ६ लाख खर्च गराएर सम्पर्क विहिन भएपछि बेहुला प्रहरीको सहयोग लिन पुगेका छन् । यो घटना भारत लखनउको हो
रविभवनस्थित सोल्टी सिटी अपार्टमेन्टमा आगलागी !
राजधानीको रविभवनस्थित सोल्टी सिटी अपार्टमेन्टमा आगलागी भएको छ अपार्टमेन्टको माथिल्लो तलामा आगलागी भइरहेको छ आगो नियन्त्रणका लागि प्रहरी,दमकल र स्थानीयवासी खटिएका छन् अपार्टमेन्टमा रहेकाहरुको उद्धार कार्य जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । घटनाबारे थप जानकारी आउन बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
दुई श्रीमती हुने पुरुषले नेपालमा ठूलो कानुनी झ’मेला बेहोर्नुपर्ने नयाँ कानुन बनिरहेका बेला संयुक्त अरब इमिरेट अर्थात् युएइमा भने सरकारले नै अतिरिक्त घरभाडा भत्ता दिने भएको छ । अविवाहित महिलाहरुको बढ्दो संख्यालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले पुरुषहरुलाई दोश्रो बिहे गर्नका लागि प्रोत्साहित गर्न यस्तो अनौठो नियम लागू गरेको अन्तराष्ट्रिय मिडियाहरुले उल्लेख गरेका छन् ।युएइका मन्त्री अब्दुल्लाह
बेलबारीकी सजना राईको मृत्युपछि अबधनारायण क्लिनिकमा तोडफोड !
चिकित्सकको लापरवाहीका कारण बिरामीको मृत्यु भएको भन्दै आफन्तले विराटनगरको अवधनारायण मेमोरियल क्लिनिक तोडफोड गरेका छन् । पित्तथैलीको शल्यक्रियाका लागि भर्ना भएकी बेलबारी नगरपालिका–८निवासी ३२वर्षीया सजना राईको मृत्युपछि आफन्तले अस्पतालमा तोडफोड गरेका हुन् । क्लिनिकमा पित्तथैलीमा पथरियाको शल्यक्रिया गरेकी महिलाको शुक्रबार बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा मृत्यु भएको थियो । अवधनारायण मेमोरियल क्लिनिकले लापरवाही गरेका
भोलि माघ ६ गते मंगलबार, कस्तो छ तपाईंको राशिफल !
मेष –आस मारेको फल पुनः प्राप्त हुन सक्छ । गोप्य रहस्य पत्ता लगाउन सकिने समय छ । उद्योग र व्यापारमा विशेष फाइदा हुने समय छ । प्रतिस्पर्धी परास्त होलान् । सहयोगीहरूले राम्रै साथ दिनेछन् र काममा सोचेजस्तै सफलता मिल्नेछ । बृष – नयाँ काममा हात हाल्ने समय छ । सानो प्रयत्नले पनि राम्रो फाइदा उठाउन